Madaxwaynaha DDS Oo Booqday Xarunta Hay’ada Shifo. |
Madaxwaynaha DDS Oo Booqday Xarunta Hay’ada Shifo.
Madaxwaynaha DDS mudane Mustafe Muxumed Cumar ayaa maanta booqday xarunta ha’yada Xanaanaynta Dadka qaba Cudurka Dhimirka ee shifo oo ah hay’ad uu aasaasay muwaadin qurba joog ah oo ka soo jeeda deegaanka soomalida.
Sida uu ka warbixiyay aasaasaha shirkada ahna Maareeyaha Guud Mudane Cabdijabaar Cali Aadan ayaa ka warbixiyay adeegyada ay bixiso hay’adani wuxuuna sheegay in ay xarunta hay’adan ku xeraysan bukaan gaadhaya 363 qof oo ay hay’adu ku dabiibayso/daawaynayo islamarkaana lagu xanaaneeyo bukaanka.
Madaxwaynaha degaanka ayaa mudadii uu ku sugnaa Gudaha Xaruntaasi indha indheeyay xaalda dadka dhimirka la iyo goobtan ay kunoolyihiin madaxwaynaha oo goobtaasi hadalo ka soojeediyay wuxuuna ku boqaadiyay masuuliyiinta iyo aas aasayaasha xarunta shaqada wanaagsan ee ay u hayaan bulshada waxana uu dhankiisa balan qaaday in ay ka xukuumada ahaan gacan wayn ka gaysan doonaan sidii wax loogu qaban lahaa dadka dhimirka la.